တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲ - ဝီကီပီးဒီးယား
တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆယ်တန်းကျောင်းသားများအတွက် ကျင်းပသည့် စာမေးပွဲတစ်ခု ဖြစ်သည်။ အစိုးရကျောင်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကဘော်ဒါကျောင်းများနှင့် ပညာဒါနကျောင်းများ စသည့်ကျောင်းများမှ ကျောင်းသားကျောင်းသူတို့သည် တက္ကသိုလ်များတွင် တက်ရောက်ခွင့်ရကြရန် ဖြေဆိုကြသည်။ စာမေးပွဲပြီးဆုံးပြီးနောက်တွင် အနည်းဆုံးသုံးပတ်ကြာ စာမေးပွဲစစ်ဆေးမှုများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် စီမံခန့်ခွဲမှုများကို လုပ်ဆောင်ကြရသည်။ စာမေးပွဲရလဒ်များကိုလည်း အဆင့်မြင့်ပညာရေးတက်ရောက်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အချင်းပြည့်မီမှုဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည်။ မိမိ၏ အရည်အချင်းပြည့်မီမှုအလျောက်
ဗဟုသုတ / အရည်ချင်းစစ်ဆေး
မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ်၊ သင်္ချာ + ဘာသာတွဲဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်
ဘာသာရပ်တစ်ရပ်လျှင် ၃ နာရီ
၀ - ၁၀၀ (ဘာသာရပ်တစ်ခုစီလျှင်)
တက္ကသိုလ်များနှင့် အထူးပြုဘာသာရပ်များကို ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်။
ယခုလက်ရှိ ကောလိပ်ဝင်ခွင့်စနစ်ကို ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ကြည့်ရှုစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင်နှစ်မှ စ၍ ကျောင်းသားကျောင်းသူများသည် တက်ရောက်သင်ကြားချင်သည့် တက္ကသိုလ်၌ ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲများကို ဖြေဆိုရမည် ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ကျောင်းသားများကို ထိုစာမေးပွဲများကို ထပ်မံဖြေဆိုမှုကိုလည်း ခွင့်ပြုထားသည်။
၃ စစ်ဆေးသည့် ဘာသာရပ်များ
တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်အဖွဲ့မှ ကြီးကြပ်လျက်ရှိသည်။
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များအတွက် မေးခွန်းပုံစံ တူညီသည့် စာမေးပွဲမေးခွန်းလွှာ ၁၁ စုံကို ပြုလုပ်ကြရသည်။ ထိုကဲ့သို့သော မေးခွန်း ၁၁ စုံပြုလုပ်သည့် စနစ်ကို ၂၀၀၁ - ၂၀၀၂ ခုနှစ် ပညာသင်နှစ်ကျမှ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုစနစ်ကို ပြောင်းလဲလိုက်သည်မှာ မေးခွန်းအချို့သည် စာမေးပွဲမတိုင်မီပင် ပေါက်ကြားမှုများ ရှိနေခဲ့သည့်အတွက် ၎င်းကို ကာကွယ်ရန် ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲဖြေဆိုကျင်းပနေစဉ်ကာလအတွင်း အရက်ရောင်းချခြင်းကို တားမြစ်ထားသည်။
အစိုးရကျောင်းများနှင့် ပညာဒါနကျောင်းများရှိ ကျောင်းသားများသည် ဖြေဆိုရန် ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာတင်ခြင်းကို ကျောင်းရှိ ဆရာဆရာများ၏ လမ်းညွှန်မှုအတိုင်း ကျောင်းတွင်း၌ပင် ဆောက်ရွက်ကြရသည်။ သို့သော် ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဘော်ဒါကျောင်းများမှ ကျောင်းသားများမှာမူ မိမိကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာတင်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်ကြရသည်။ နိုင်ငံတကာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာကျောင်းများနှင့် ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းများမှ ကျောင်းသားများမှာမူ ဤစာမေးပွဲကို ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့် မရှိသည်သာမက မြန်မာနိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်များတွင် ပညာသင်ကြားခွင့် မရှိပေ။ 
နှစ်စဉ် ကျောင်းသား ငါးသိန်းကျော် စာမေးပွဲကို ဖြေဆိုကြသည်။ စာမေးပွဲကို ကိုးရက်ကြာ ကျင်းပပြီး နှစ်စဉ် မတ်လလယ်တွင် ကျင်းပသည်။ စာမေးပွဲရလဒ်များကို နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင် ဇွန်လ၌ ထုတ်ပြန်ကြေညာသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် စာမေးပွဲဝင်ရောက်ဖြေဆိသူ ကျောင်းသားပေါင်း ၈၅၁၅၇၀ ဦး ရှိသည်။
ကျောင်းသားများ၏ ဘာသာတွဲရေးချယ်မှုပေါ်မူတည်၍ စာမေးပွဲမေးခွန်းသည် ခြောက်ခု ရှိသည်။ ဘာသာတွဲများတွင် ဝိဇ္ဇာတွဲနှင့် သိပ္ပံတွဲဟူ၍ ရှိသည်။ ဖြေဆိုရသည့် ဘသာရပ်များတွင် မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ သင်္ချာ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ၊ သမိုင်း၊ ပထဝီ၊ ဘောဂဗေဒ၊ စိတ်ကြိုက်မြန်မာစာ တို့ ပါဝင်သည်။ ဘာသာရပ်တစ်ခုအတွက် စာမေးပွဲဖြေဆိုချိန်သည် သုံးနာရီ ကြာမြင့်သည်။
ဘာသာရပ်တစ်ခုတွင် မြင့်မားသည့်အမှတ်(မြန်မာစာဘာသာရပ်၊အင်္ဂလိပ်၊ ဇီ‌ဝဗေဒနှင့် ဓာတုဗေဒဘာသာရပ်များတွင် ၇၅ မှတ်နှင့်အထက်၊ ကျန်ဘာသာရပ်များတွင် ၈၀ မှတ်နှင့်အထက်) ဖြင့် ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ပါက ဂုဏ်ထူး ဖြင့် အောင်သည်ဟု သတ်မှတ်သည်။ ဂုဏ်ထူးရဘာသာသည် ငါးဘာသာ သို့မဟုတ် ခြောက်ဘာသာ ရသည့်ကျောင်းသားများသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆေးတက္ကသိုလ်များသို့ တက်ရောက်ခွင့် ရကြလေ့ရှိသည်။ ဆေးတက္ကသိုလ်များသည် ကျောင်းသားများအကြား ရွေးချယ်မှုအများဆုံး တက္ကသိုလ်များလည်း ဖြစ်ကြသည်။ မကြာသေးမီနှစ်များတွင် ငါးဘာသာဂုဏ်ထူးဖြင့် ပေးမှတ် ၆၀၀ ရှိသည်တွင် ရမှတ် ၅၀၀ ကျော်ရရှိသည့် ကျောင်းသားများ ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ စာမေးပွဲကို အောင်မြင်သည့် ကျောင်းသားများကို ရေဒီယိုမှတစ်ဆင့် ဖြေဆိုခဲ့သည့် စာစစ်ဌာနနှင့်တွဲ၍ ကြေညာပေးမှုလည်း ရှိသည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ဖြေဆိုသူ ကျောင်းသားများ၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် အောင်မြင်ခဲ့ကြသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် အောင်မြင်မှု ၃၇.၆ ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကထက် ၇ ရာခိုင်နှုန်း တိုးလာခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံးအောင်မြင်မှုမှာ ၃၂.၈၂ ရာခိုင်နှုန်း ရှိခဲ့ပြီး မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးသည် ၃၈.၁၇ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အမြင့်ဆုံး ဖြစ်ခဲ့၍ ချင်းပြည်နယ်သည် အောင်မြင်မှုရာခိုင်နှုန်း အနိမ့်ဆုံး ဖြစ်ခဲ့သည်။
↑ Myanmar။ World Data on Education (2010)။ 18 July 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂.၀ ၂.၁ May Thinzar Naing။ "University application process to be reformed"၊ Myanmar Times၊ 18 May 2015။ 18 July 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Announcement for submitting matriculation exam applications"၊ 2007-09-14။ 2010-09-03 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 28 April 2011။
↑ ၄.၀ ၄.၁ Kirkpatrick, Robert (29 May 2013). "The Myanmar university entrance examination". Language Testing in Asia3(14). Springer.
↑ Ye Ye Htwe and Shwe Yinn Mar Oo။ "No booze as students cram for their exams"၊ 2008-03-10။ 2010-09-03 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 16 December 2010။
↑ "Burma Considers Private Education"၊ 2009-11-18။ 2010-09-03 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on5October 2010။
↑ Min Zaw။ "Parents feel the stress of matriculation"၊ 2008-03-17။ 2010-09-03 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 30 April 2011။
↑ Over 850,000 students participate in Myanmar's matriculation exam - Xinhua | English.news.cn။
↑ "Timetable of 2010 matriculation examination announced"၊ 2009-12-19။ 2010-09-03 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 13 November 2010။
↑ Aung Shin။ "Result of matriculation exam on air through Radio Myanmar"၊ 2010-06-13။ 2010-09-03 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 13 November 2010။
↑ Aung Shin။ "Results of matriculation exams posted"၊ 2010-06-15။ 2009-09-03 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 16 December 2010။
↑ "Number of students to pass University Entrance Exam with distinctions rises"၊ Eleven Myanmar၊ July 2015။ 18 July 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on4March 2016။
↑ ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးအလိုက် အောင်ချက်နှင့် ဂုဏ်ထူးဦးရေပြဇယား။[လင့်ခ်သေ]
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲ&oldid=737306" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၁ မတ် ၂၀၂၂၊ ၀၆:၂၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။